तपाईँको फोन नम्बर फेसबुकले विज्ञापनका लागि प्रयोग गरेको खुलासा, के हो टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसन ? - Technology Khabar
» तपाईँको फोन नम्बर फेसबुकले विज्ञापनका लागि प्रयोग गरेको खुलासा, के हो टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसन ?
Technology Khabar १२ आश्विन २०७५, शुक्रबार
काठमाडौँ । सामाजिक साइट फेसबुकले विज्ञापनका लागि यूजर्सको फोन नम्बर प्रयोग गर्ने गरेको स्विकार गरेको छ । फेसबुकले विहिबार यूजर्सको फोन नम्बर विज्ञापनदाताले समेत प्रयोग गर्ने गरेको स्विकार गरेको छ ।
फेसबुकले यूजर्सलाई सुरक्षामा प्रयोग गर्ने गरेको टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसनका लागि प्रयोग गर्ने फोन नम्बर विज्ञापन लक्षित गतिबिधिमा प्रयोग गर्ने गरेको हो ।
फेसबुकले यस्तो फोन नम्बर यूजर्सको एकाउन्ट सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्ने गरेको बताउँदै आएकोमा अमेरिकाका दुई विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनमा दुई फ्याक्टर अथोन्टिकेशनका लागि प्रयोग हुने गरेको फोन नम्बर लक्षित बिज्ञापनमा उपयोग हुने गरेको पाईएको हो । अध्ययनकर्ताहरुले कम्पनीले व्यक्तिगत जानकारीलाई विज्ञापनका लागि प्रयोग गरेको भेटिएको बताए ।
रिसर्चरले कन्ट्याक्ट लिस्टलाई फेसबुकमा पर्सनल इन्फर्मेशनको लागि अपलोड गरिएको हुन्छ जसको अर्थ कुनै न कुनै विज्ञापन कम्पनीहरुलाई यो विषयको फाइदा हुन्छ र यूजर्सका साथीहरुलाई लक्षित गरेर विज्ञापन गर्ने गरेको खुलासा गरेका छन् ।
फेसबुककी प्रवक्ताले भनिन्, ‘हामी मानिसहरुको नम्बर यसको लागि लिन्छौं कि उनीहरुले फेसबुक प्रयोग गर्ने अनुभवलाई अझ आकर्षक र उत्कृष्ट बनाउन सकियोस् जसमा विज्ञापन पनि समावेश छ ।हामीलाई थाहा छ की हामीमार्फत दिईएको जानकारीको प्रयोग कसरी हुन्छ । तपाईँले आफ्नो अपलोड गरेको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेशन कुनैपनि बेला व्यवस्थित र डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ ।’
के हो टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसन ?
टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसन सिक्योरिटीको रुपमा प्रयोग हुने गर्दछ । जून सिक्योरिटीको दोस्रो स्टेप हो । यसमा फेसबुक यूजर्सलाई मोबाइलमा टेक्स्ट म्यासेजको माध्यमबाट कोड प्राप्त हुन्छ जहाँ उनीहरुले आफ्नो एकाउन्टको सिक्योरिटीको लागि सो कोडको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो सिक्योरिटी कोडका लागि यूजर्सले आफूले प्रयोग गर्ने गरेको फोन नम्बर प्रोफाइलमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
फेसबुकमाथि यसअघि पनि पटक पटक डेटा दूरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कम्पनीले ८७ मिलियन यूजर्सका डेटा तेस्रो पक्षलाई बेचेको स्विकार गरेको थियो ।